Kuma ayaa Fadhiya Gurigii Mililiq?
Xamarweyne, Dismeebar 28, 2006
Kha�i teen wax khaatira Ilaah nimaan ka khoofeyne
Ninkii khayr sameeyaa wax roon loo khatimayaaye
Nin khiyaami yiriyow wallaad u khatalmaysaaye
Khatar haysku ridin jeer danbay kula kharaaraane.
(Sheekh Cali Cabdiraxmaan Fiqqi Khayrre: �Alif Yeen�/1835)
HADDII AAD SOOMAALI TAHAY, haddii aad qabyaaladda neceb tahay, haddii aad Soomaalinimada jeceshahy, haddii aad tahay Muslim Ilaahay yaqaan: waa adiga qofka aan maanta la hadlayaa; marnaba na, ma na oggolaadeen in akhriyo biiriqaate, weliba Soomaalinimadii na gabay. Soomaali diidow silac u dhimo! Waan ka samreynaa, silac u dhimo!
Wiilkii Damaca Waalanaa
ATO MELES ZENAWI, JACEYLKA uu awoodda u qabo, dhadhabkiisu waa mid soo jiray teeryo carrurnimadiisii. Matxafka Addis Ababa, ilaal ka shaqeeya ayaa u sheegay Maxamed Diiriye, aqoonyahan Soomaaliyeed, in Meles oo cagabbaruur ahaa, beri, isaga oo baal maraayay gurigii Menelik, ka ku yaal Addis Abeba; inta uu ku dheygagay, dabadeed na hooyadii ku yidhi:
�Hooyooy gurigaas baan doonaya.�
�Aamus,� ayay tidhi hooyadii.
�Kaas waa hooygii Iberatoorka, ma na dhex fadhiisan doontide.�
Gabankii yaraa, Meles, oohin ayuu ku waashay; ilamo ayaa ku dul dareertay dhabannadiisa, taas oo ay ugu wacnayd argaggaxii ay hooyadii ku ridday.
Durbadii ba na, ooyintii intuu joojiyay ayuu yiri, �Gurigaas ayaan dhex fadhiisan doonaa goorta aan hanaqaado� (Mohamed Diriye Abdullahi. �The Jackal, the Hyena and the King of Beasts in Somalia�. Hargeisa, Somaliland, Jannaayo 1, 2007).
Waa Kuma Menelik II?
Menelik II�Soomaalidu na ay u taqaan Mililiqii Labaad�waa Iberatoorkii Xabashida ee ku caanbaxay boobitaanka dhulalka dadyow kala jaad ah ee maanta wada hoostaga gumeysiga dalka dhalanteed ah ee loogu yeero Itoobiya. Mililiq II (1889-1913), afaryalabaatan dabshid, ayuu ahaa boqorkii Xabishada. Haddii aan sheekadiisa in kooban kaaga soo qaado, waxa jiray dhambaal hirgalay, kaasoo ay maalintiisu na ahayd Abriil 10, 1891. Dhambaalku waxa lagu kala hagaajiyay Gumeysteyaashii Dhulweynaha Afrika ee Reer Yurub, sida Jarmalka, Faransiiska, Ingiriiska,Talyaaniga, iyo Ruushka. Nuxurkii dhambaalka na waxa ka mid ahaa: �Afar iyo toban qarni ayay Itoobiya ahayd jasiirad ku dhextaal bad wada cawaan iyo diinlaaweyaal miiran ah�. Soomaalida waa in dib loogu baraarujiyaa tibaaxoha kale ee beenabuurka ahaa, kuwaas oo ka mid ahaa isla qoraalkaas isaga ah: �waayadii hore soohdinta Itoobiya badda ayay ku sinnayd, hase ahaatee kolkii ay wayday awood ku filan oo ay wax isaga caabbiso, xoogaggii kiristaanka ahaa na ay wax kaalmo ah taaran waayeen, ayay soohdimahayagii badda gaarsiisnaan jiray waxa ay u gacangaleen quwado Musulmaan ah.� Maanta Meles Zenawi waxa uu maleegayaa shirqool horleh, kasoo lagu dhammeystiri doono halgankii Boqor Mililiq ee qabyada ahaa��isballaarinta xagga dhulka iyo gacan ku dhigidda badaha ay ummadda soomaalidu leedahay� (Cabdirisaaq Xaaji Xuseen. �Ethiopian Unwarranted Interference in Somali�s Internal Affairs�. Somalitalk.com | May 19, 2002; Afcelintii: Axmed F. Cali idaajaa).
Soomaalida waxa aan ka codsan lahaa in ay si feejigan ugu hortagaan damaca waalan ee Ato Meles Zenawi�diktatoorka dhexgelay Guri Mililiq, kalitashadeha ku fadhiya kursigii Menililiq, hoggaamiyeha burcadda Tigreega ee doonaya in uu ka dhabeeyo Riyadii Mililiq II�sheegashada Xeebahii Banaadir. Boqor Mililiqii II, isagu, ma arag Badweyntii Hindiga, weligiis na ma maqalin hugunkeeda. Ogow se, Meles Zenawi hore ayuu Badweynta ugu dabbaalbartay, hore ayuu na uga soo daalay hugunkeedii: waxa uu hataan istaawinayaa in aan ay jirin, hirar, damicii Mililiq hafin kari doono�macnaha, Soomaali wax iska dhicin karta.
Arladaa la kala Boobi
Ma og tahay Madaxweyneha�waxa loogu yeero�Dowlad Goboleedka Ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiyo Md Cabdirashiid Duulane, iyo dhiggiisa MW Junegdi Saddo ee Ismaamulka Oromada in ay warmurtiyeed ka soosaareen xurguf ka dhexeysay labada Ismaamul, taasoo ku saabsanayd xuduudaha u dhexeeya labadooda dalal ama labadooda Itoobiyo. (Isha: http://www.djibnet.com/; Khamiis, Diseembar 19, 2002)
Maanka Soomaalida Ogaadeenya (Soomaali Galbeed), maanka Oromada Oromiya, iyo maanka Tigreega Tigraaya, beryahan, waa kala maan. Kolkii la afbembiyay diinlaawehii la oran jiray Mengistu Haile Mariam ayuu Meles Zenawi ogolaaday: �lixyatoban gobol ay Itoobiya ka koobnaan jirtay, in shan gobol oo qura, ay iskood isu taagaan�. Oromiya iyo Ogaadeenya, labaduba, waxa ay ka mid ahaayeen shantaas gobol. Dadyowgii Oromo iyo Soomaalida waxa la dhex dhigay colaad lagu saleeyay diinta Tigreega�dhulballaarsi. Yaa foodda isu gelinayay labadaas ismaamul?
Haddaba, bal arrimaha soo socda ila eeg, walaal. Oromada waxa laga raariday�magaalooyin ay weligeed Soomaalidu lahaan jirtay�in sitaan magacyo asal ahaantoodii hore ka soo jeeday afaan Oromo (af Oromo). Tusaale ahaan:
Magaalada Fayaanbiiro, dhacda inta u dhaxaysa Jigjiga iyo Harar: Taliska Tigreegu waxa uu Oromada ku soo boorriyay in ay Soomaalida ka qixiyaan. Oromo waxa ay ku doodeysaa in magaca ama ereyga Fayaanbiiro uu yahay ladhkab ka kooban �Fayaan� iyo �biiro�; afka Oromoda na ku noqonaya salkii suurta; waayo magaalada iyada ah ayaa buur salkeed ku taalla.
Ilihii dhaqaaleha Soomaalida, magaaladii ganacsiga, Diridhabo, ayaa lagu qeexay dood kale, oo gurracan. Afka Oromada, sida kii Fayaanbiiro ba, isagu na waxa uu ka koobmaa �dirree� iyo �dhawaa�; tibaax afka Oromada u dhigmeysa: �garaacii dhulka�; waayo, Oromadu waxa ay rumaysan yihiin in magaalada laga dhisayay dhul didib ahaa; si ay fuundigii u qiireeyaan, in ay u qaadi jireen heeshawleed ahayd, dirree dhawaa: �dhulka garaaca�. Sidaas ayuu na ku baxay maagaca �Dirreedhowaa�
Magaalomadaxda Dowlad Goboleedka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya ee jigjiga, ayaa, haddana, iyada na afaankii Oromo (afkii Oromo) lala soo galay. Sidii kuwii aan soo aragnay ba, Oromadu waxa faafisay in ereyga Jigjiga uu ka soojeedo "ji iyo jituu� ama �jii iyo jiiggaa��macneha waa �dhul iyo gariir� ama ba: Dhulkii Gariiri Jiray.
Hargeysa, caasimadda Somaliland, Dowladda Ismaamul Goboleedka Soomaalida Soomaaliya ayaa qaansheegadkii reer Oromiya wax ka soo gaadheen. Sidii kuwii kore ba, waa �hargga iyo gaysa��waa weedh u dhiganta hargaha geeya. Oromadu waxa ka dhaadhacsan in ay awooweyaashood ganacsi la lahayn jireen waayadii Carabtii ka beecmushtari jirtay xeebaha Afrika ee Badweynta Hindiga iyo Gacanka Cadan.
Berbera iyo Oromiya waxa iska galay ayaa kuu laaban. Afka Oromada �bir iyo birraa� ama bil iyo billaa��micneheedu na waa �magaaladii ololeysay ama kululeed�.
Intaas waxa aan uga baxayaa sida dadyowga Itoobiya qoorta la isugu gelshay. Dhagartaas Tigreegu waxa uu ka helay waayaragti weyn: waa na tii ookale waxa uu haatan ula soo cidgalay Soomaaliweyntii��qeybi oo xakun�. Midda ugu wada xun waa goorta la yaso afkaagii hooyo iyo dhaqankii dadkaagii. Qolo loo oggol yahay ma jirto, haddii ay ama Soomali yihiin ama Oromo, in ay afafkooda xafiisyada dowladahooda uga shaqeeyaan. Mudnaan lahaydaa in la xusuusto, Oromada�dad uu hataan kahor Maxamed Siyaad Barre (aun) ba uu yeelsiiyay in ay ku dagaalgalaan magaca Soomaali Abo�in ay sheegtaan caasimadda dalka Itoobiyo! Diktatoorkii Soomaaliya, Macallinkii Kacaanka, waxa uu ogaa in dadka la sinjidhaami karo, la na dhalanrogi karo; waa se haddii waxdheef ay kugu qabaan. Yaa ii sheegi kara Soomaaliga waxdheefka ku haysta Tigreega Itoobiyo? Soomaaliga doonaya dalkiisii, dadkiisii, iyo diintiisii ba in uu dhaafsado, tacbada na halalad beeso ah? Waa kuwama �� niman sidii baaniyaal beeso uun rabo� (Ina Suusle. �Boocame II�)? [baaniyaal: waa ganacsade Hindi ah; waa kuwaas maantadan ka ganacsanaya meydkii Soomaalida reer South Afrika. Ereyga dagaalooge in lagu tilmaansado bahalladii Soomaalida dilay, ereyga baaniyaal ayaa kaga habboonaan lahaa. Waayo baaniyaalku waa manexe dadka dhibaateysan ka dheefsan jiray, weli na ka dheefsada: waa sida gudurigii ama geeltoosiyehii ee bakhtiga uun cuna; haddii kale na eegta teeryo inta ay nafleydii ka dhiman doonto. Maanta wixii ka dambeeya aan ugu yeerno baaniyaal ragga ay ka mid yihiin Daahir Qanyare, Cabdi Waal, Cabdi Qeybdiid,Xuseen Caydiid, Muuse Suudi, Bootaan Ciise, Cumar Finish � iwm.] Goorhdow ayay Soomaalidu na ku fuli doontaa, waddadii lagu habaabiyay dadyowgii reer Oromya. Meles Zenawi, Soomaalida si uu u legdo, waxa uu u kaashan doonaa Oromo uu soo liqsiiyay sixirkii dhulballaarsiga: in Oromadu dib mar kale u sheegtaan dhulkoodii, kii ay Soomaalidu iyaga wahore ka �gaalkacasadeen��Gaalkacyo ookale. Gaalla�waa fir ka mid ah firarka reer Afrika ee loo na yaqaan Oromo! (Wikipedia: �galla�.) Gaalkacyo, beri beryaha soosocda ka mid ah, haddaa, ma Puntland ayaa lahaan doonta? Reer Bariga Soomaaliya ayaa waxa ay ku maahmaahaan, �adigoo nabad u balawaaja belooy kaalay lama yiri; belo hadday timmaddana, lama booyo boowow�! Yaa Salaam. Oday Cadde Muuse, mooji inuu u joogi doono, halabadii Oromada gooraha uu Tigreegu u baadifadi doono!
Darraad, waxa argaggax igu riday, jawaabihii uu i siiyay arday wax ka barta Dugsiga Sare ee Axmed Gureey.
�Dhul la yiraahdo Soomaaliya, miyaa maabka ku yaalla?� ayaan weydiiyay.
Weydiin kale ayaan ku celshay, �ma jirtaa magaalo la yiraahdo Taytu Betul?�
Ardaygii, sitaahoo uu af Soomaaligii illoobay ayuu indhaha ka mirigsiiyay. Af Tireega ma taqaan? Kaas ayaa ii sahlanaan lahaa in aan ku sheekeeyo? In yar dabadeed ayuu se igu yiri, �Haah! Iminka ayaan gocday. Raalli iga noqo warcelinta aan la soo daahay. Sheekooyinkii hore iyo taariikhda beryahaan iskuulka laga dhigo ayaa iskaga kay qasnaa. Horta, magacii Soomaaliya la oran jiray waa la baabi�yay; waxa lagu bedelay magac yaab leh oo illaayo hadda la garan la� yahay waxa ay ujeeddadiisu tahay: Bal ka warran, haddii magacii Soomaaliya lagu bedelay �Riyadii Boqorrada�? Muqdisho na, magac cusub, Taytu Betul ay loo baxshay. [Taytu Betul waa magacii boqoraddii Xabashida (1889 - 1913), afadii Mililiq. Dhanka reer aabbeheed waxa ay ka soo jeedday, ugaasyo ka talin jiray degmada la yiraahdo Yejju, kuwaas iyagu na ka soojeeday fir ahaan, qoyasas Oromo ahaa asii Musliin ahaa;bal se, xukunjaceyl dartii u wada gaaloobay. Taytu Betul, waa Iberatooraddii sahansatay halka ay maanta dhacdo xarunta Addis Ababa�tibaaxdaas oo la macne ah: Ubaxii Cusbaa.] Soomaaliya waa kililka Lixaad�qeyb aan sina uga go�i doonin�dhulweyneha Itoobiya. Soomaalidii na waa la toleeyay. Qaar na Tigree ayaa sheegtay; haraagu na, gocgocii na, Amxaarada ayaa diiwaangashatay. Addis Abeba na, waxa noqotay Caasimaddii Cusbeyd ee Riyadii Boqorrada.
Colaaddiihii sokeeye sidii ay dalka uga qarxeen, af Soomaali candadawlan (qaabdaran, silloon) ayay Soomaalidii ku wadahadlayaan. Maya, waa aan hafay. Aan kuugu soo celsho halkaas: Ma jiro wax la yiraahdo wadahadal; Soomaalidu ma wadahadlaan ee waa ay fadhi-ku-diriraan. Maanta Soomaalidii afjaxuunsi ayay isku harowsadaan. Maxaan doonaya in aan kaaga hadlo? Haa. Ardaygii Axmed Gureey, ereyo baas oo aan garan kari waayay ayuu intaas igula fadhidirirayay. Haddaba, aniga iyo isagii, innaga oo isku dhakafaarnay ayaan halkii ku kala dhaqaaqnay. Dhan kasta oo aan ka eega se, wallee arday Tigree ah oo wax ka barta Dugsiga Sare ee Menelik II ayaan iiga soo dhowaan ardayga Soomaaliyeed ee Dugsiga Sare ee Axmed Gureey wax ka barta. Ardaygan isaga ah, ogow, aqoon kale ayaa ba iiga korortay. Casharro, kuwo weliba aan loo dhigin weligood xitaa bareyaasha dugsiyada sare waxkadhiga, iyo Barfasoorrada jaamacadha waaweyn lakjarrada ka akhriya, iyo hagarta weligeed lagu indhasarcaadi jiray siyaasiyiinta Baarlamaannada Soomaalida codeyntoodii: Arrimo aanan weligay ba u dhabbagelin ayuu daahyadii iiga rogay.
Anigu, ardaygaa kahor, weligay ba ma ogeyn, cid ogeyd ma ba jirin in Hargeysa dowlad iska lahayd, Daahir Riyaale na uu madaxweyne ka ahaa! Bosaaso in ay dowlad iska lahayd, Cadde Muuse na uu madaxweyne ka ahaa! In Xamar ayan dowlad lahaan jirin, jawrfaleen ama jafaliille, midkood na, weli madaxweyne ka noqon�16 sano ee u dambaysay! Sidee wax uga jiraan? Ma sheegi karo. Hal baan se kuu og ahay: Iyada oo la dhiso dowlad Xamar u gaar ah mooyaane, dowlad federaal la yiraahdo oo Soomaaliya ka jirta, qofow na ha aqoonsan. Ka Soomaali ahaan, aniga laf ahaantayda, ma jirto dowlad Soomaaliyeed oo aan aqoonsan ahay. Heey Nabee! Jabuuti na ku sii biiri, haddii ay wax kuugu muuqanyaan sida aan wax u arkahayo; haddii kale, adiga ayaa Baydhabo siyaasado dahsoon ku og.
Reer Muqdishu, imisa beri, imisa bilood, imisa sanadood, imisa qarniyaal ayay ku qaadan doontaa, Tigreega boobay madaxbannaanidoodii, si ay mar kale dib uga soo dhacsadaan? Inta aanan meel fog lagala dhicin, waar maa soo marooqsadaann qarankoodii la dafay! Burcadda Tigreega ha ka saareen Koofurta Soomaaliya. Kuwoodii aan ka bixin na, digniinta na aan maqal; waa dhegool ee dhegaha dhiig ha loo daro; koodii aan mujaahidiinta aan arkayn na; waa indhoole; indhahiisa wax ha ku arko. Mujaahidiinta Soomaaliya, hubkooda, sida khaa�imiinta qaranka ay yiraahdeen, waa in ayan geyn Hiilweyne ama Laantabuuro: Xeerooyinkaas wixii la geeya ba ha noqdeen lafaha Tigreega ee Soomaaliya ku soo duulay!
Walaal, ha iloobin halgankii ay awooweyaasheen ugu galeen xoreyntii Soomaalida. Gumeysi, kii ugu weynaa ayaa maanta Soomaalidii lagal keenay. Gumeysi garbo og. Gumeysi Soomaali kala jabay og. Gumeysi og dal ay barwaaqo ka buuxdo. Haddii laga tirtiri lahaa �argagixiso,� tii ugu arxan darrayd hadda ayay Muqdisho timi: Waa kuma Ato Meles Zenawi? Waa aabbehii ashahaada-la-dirirka iyo hoggaamiyeha faqashtii Tigreega: Ninka gaaladii Amxaarada xasuuqay, ma waxa uu babaadin shacab Soomaaliyeed oo weliba Muslim ah? Ya dabbaal oo duurka loo diraa, aw diindiin (Maahmaah Banaadiri).
Dowladda Federaal KMG waa dowlad Shaydaankaas uu soo dhistay; waa dowlad midiidin u ah Shuftada Tigreega, taasoo Soomaalida u soo jiidday �taariikh iyo mahadhooyin madow�. Daydaydii xeradii Carmo, mooryaantii Daay-Nuunnaay, iyo xujeereebtii Manaas, kuwaas kuma sheegeen Xooggii Dalka Soomaaliya; bal se waa Hooggii Dalka Soomaalida. Ciidan qaran oo aan anigu oqoonsan ahay maanta kama jiro dalkii la isku oran jiray Jamhuuriyaada Soomaaliya. Horta sideeda ba dalka yaa ciidan u ah? Soomaaliyeey, haddii aynaan mideeynin halgankeenna, innaga oo aan xitaa waxba galabsan, waa hubaal, in la inoo hoobin sidii ayax, �geedaha � sun loogu daray� (Ismaciil Mire, �Guuguule�).
Xamar waxa loo sammeyn maamul goboleed, taasoo Maxamed-Dheere ookale uu madaxweyne ka noqon doono. Dowlad wanaagsan, iga dheh; ogowse se, Meles Zanawi waa uu ridi doonaa, haddii madaxweynuhu, sideeda ba, aan uu noqon mid sokeeyehiisa laaya, qarankiisa na halakeeya. �Basaas faayow doorta, kaasoo ka ganacsan kara geerida qarankiisa,� ayuu Meles Zenawi, beri hore, kula dardaarmay baaniyaalladii Soomaaliya. Xamareey, tayada lagu dheer yahay ba, maanta, waa wax intaas ku siman uun: Weligaa na ha dooran wadaad Ilaahay yaqaan uun, sheekh aan Ameeriko u aabayeeleyn, iyo qaaddi Shareecada Islaamka okobban�Xeerarkii Ilaahay na�wax kasta ba ku garsooraya. �Muslimiintu waa Al-Qaacida waalan,� Meles Zenawi ayaa yiri, �Soomaalidu waa in ay Soomaaliya ka aasaasaan dowlad aan Islaamnimo shaqo ku lahayn.�
Akhristow, bal adigu ba malee: Maanta kuma ayaa ka taliya Gurigii Menelik? Maxaysatada Tigreegu se dib ma uga laaban doontaa Banaadir, gobollo, Boqorkii Menelik uu ku beerlaxawsan jiray, gumeysteyaashii reer Yurub ee macatabka xirnaa, in Musulmaanku uu ka kacsaday Imbaratooryadii Itoobiya�Yaityopya Nigusa Nagast Manguist?
Ma og tahay in uu weli jiro, xusuustooda Orooma, magac aan weli ka tirmin; asii laga tirtiray dhaxalreebka qoran ee Amxaarda iyo Tigreega ba? Addis Abeba, intii kahorreysay 1887, waxa degaan ahaan iska lahaan jiray qaranka Oroomo (badanaanta dadyowga Itoobiya), taasoo, magaaladaas, illaayo haatan ay ugu yeeraan Finfinne. Soomaalida qaar ayaan xogogaal u ahayn weli, Oroomadu ba in ay soo lahayd hees tii Hadraawi dhiganta: �Finfinneey ma nabad baa?�
�Xamareey ma nabad baa?� Bariidadaan dhiillaysan, maalinka maanta ah, walow ay aad u qadhaadh badan tahay, misna ha niyadjabin; illayn, abwaankii sillansugannada, Axmed Ismaaciil Diiriye, kii ku caanbaxay Qaasim (1933-2006) ayaa nagu baraarujiyay, �dacarta� xaraarka badan, isla jeer ahaan, in ay dhali karayso �dhabaq� macaan badan; ogowse, maanmaalkii Soomaaliyeed, abwaan Hadraawi, ayaa beri inoo tilmaamay gabyaa kale, kaasoo ifafaalooyinka �asteeya�. Haddaba, su�aashii kasta ee silloon �Cabdi-Qays ba weydii�: Haddii uu jiray dhul, Amxaarku iyo Tigreegu ba, intay ku soo qamaameen, haddana, ay dib uga qaxeen?
Xamar, Dismeebar 28, 2006